Location: musha » Kutumira » Kuputsa Kufamba Nhau » Rihanna muBarbados ane Mwana Wake Bump uye Bikini
mufananidzo nerubatsiro rwe @gabgonbad, twitter
Rihanna ari muchikamu chechitatu chemimba yake uye akawana nguva yekuzorora kumba muBarbados nguva pfupi yadarika ndisati ndadzokera kuLos Angeles, California.
Akaonekwa achivheneka bhikini yakashongedzwa neyakaiswa pazasi pebundu remwana riri pachena pamhenderekedzo yegungwa munyika yake. Sezviri pachena anoda sequins, Rihanna akaonekwa mune yegirini sequined bikini uye tsvuku uye orenji bikini.
Rihanna akataura neRefinery29 kutanga kwegore rino pamusoro pekuda kwaaida kutsanangura patsva kuti maitiro ekusunungukira anotaridzika sei, achiti: “Izvozvi ndiri kunyatso kupinza pfungwa yehutsvina. Kana vakadzi vabata pamuviri, nzanga inoita kuti iite sekunge unohwanda, kuviga seksi yako, uye kuti hausi sexy izvozvi [asi] uchadzokera ikoko, uye ini handitendi mune iyo sh*t.
"Saka ndiri kuedza zvinhu zvandingave ndisina kana chivimbo chekuedza ndisati ndave nepamuviri."
"Iyo yakasungwa zvakanyanya, yakaonda zvakanyanya, uye yakanyanya kuchekwa inova nani kwandiri."
apo Rihanna nemukomana wake Rocky akadzokera kuLos Angeles, Rocky akasungwa paLAX Airport nekurova nechombo chinouraya chine chekuita nekupfura kwaNovember 2021. Sekureva kwebepa reEntertainment Tonight, vaviri ava havana kuona izvi zvichiuya uye vakavharwa maziso pavakasvika panhandare yendege.
The ET sosi yakatsanangura kuti: "Rihanna akaita nhanho yekufambisa divi reruzhinji rwepamuviri pake maererano nezvake uye zvino zvinhu zvinongoerekana zvaita sezvisingamudzori. Mutambo uyu ndicho chinhu chekupedzisira chinodiwa naRihanna izvozvi. Anoda kuva akapfava, akasununguka, uye akanangidzira ngwariro 100 muzana pakusvika kwomwana wake—kwete kumanikidzika!”
Rocky akapomerwa kuenda kune murume waaiziva mumugwagwa asati amupfura kakawanda muna Mbudzi 2021. Imba yake muLos Angeles yakaonekwa nguva pfupi yapfuura nerori yeU-Haul mumugwagwa. Imba iyi yakapindwa nemapurisa mushure mekunge vasvika pamba apa vachitsvaga waranti yekusecha uye vakashandisa simbi yekurovera gedhi rekumberi kwake.
Croatia kutora Euro, kuva nhengo yechi20 yeEurozone